Home ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ စီးပွားရေးသတင်း ဆောင်းပါး မြန်မာနှင့် လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ သတင်းပြည်တွင်းသတင်း ဒေသန္တရသတင်း ပြည်သူ့အသံ ကမ္ဘာ့သတင်း ကြားဖြတ်နှင့် သတင်းအကျဉ်း ရသသတင်း နာရေးသတင်း အားကစားသတင်း အမှားပြင်ဆင်ချက် အင်တာဗျူး အထူးကဏ္ဍပြည်သူ့စစ်သား သုတေသနနာဂစ် ၁ နှစ်ပြည့် အမေရိကန် ပေါ်လစီနှင့် မြန်မာရေးရာ ကမ္ဘာ့ ဘဏ္ဍာရေး အကျပ်အတည်း ၈ လေးလုံး အထူး အာဇာနည်နေ့အထူး အမေဒေါ်အမာ အထူး ဆန္ဒခံယူပွဲအထူး ကမ္ဘာ့ဖလား ၂၀၁၀ မြစ်ဆုံ ရေကာတာ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲရွေးကောက်ပွဲ သတင်းဖြစ်စဉ်များ ရွေးကောက်ပွဲတွင်း တင်ဆက်မှု ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်လိုသူများ ရွေးကောက်ပွဲ မဝင်သူများ ပါတီအကြောင်း သိကောင်းစရာ ရွေးကောက်ပွဲ အထူး လွတ်မြောက်မှုသို့ သိုမှီးရာရန်ကုန်နှင့်မုန်တိုင်း မြန်မာပြည်နှင့် သက်ဆိုင်သော ကြေးနန်းများ အိုဘားမား မြန်မာ ခရီးစဉ် အာဘော်နှင့်အမြင်ဆောင်းပါး အယ်ဒီတာ့ထံပေးစာ အယ်ဒီတာ့အာဘော် သဘောထားအမြင် ညွှန်းဆိုရာ ရသဘဏ်တိုက်ကဗျာ ပြဇာတ် စာအုပ်စင် ရုပ်ရှင် ခရီးသွားဆောင်းပါး မားလ်တီမီဒီယာဗီဒီယို Photo EssayPhoto Essay. ဓါတ်ပုံ ကာတွန်း ဂျာနယ် မဇ္ဈိမ ရေဒီယို မဇ္ဈိမတီဗီRFA & Mizzima TV Voter Voices Mizzima TV Weekly: Business News ကြေညာချက် Home > အထူးကဏ္ဍ > သုတေသန > မြစ်ဆုံ ရေကာတာ
မြစ်ဆုံဆည် စီမံကိန်းတွင် တရုတ်ဝန်ထမ်းများ ရှိနေဆဲ	သောကြာနေ့၊ အောက်တိုဘာလ ၁၄ ရက် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ၂၁ နာရီ ၃၇ မိနစ်	ဖနိဒါ	မြစ်ဆုံ ရေကာတာ စီမံကိန်းကို ရပ်ဆိုင်းထားသည်ဟု သမ္မတဦးသိန်းစိန်က လွှတ်တော်သို့ ပြောကြားခဲ့သော်လည်း စီမံကိန်းတွင် တရုတ်ဝန်ထမ်းများ ဆက်လက်ရှိနေသေးကြောင်း ထိုင်းနိုင်ငံ အခြေစိုက် ...
CPI တရားစွဲလျှင် စာချုပ်ပါအချက်များ အများပြည်သူကို ထုတ်ပြန်ရန်လို	ကြာသပတေးနေ့၊ အောက်တိုဘာလ ၀၆ ရက် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ၁၃ နာရီ ၁၆ မိနစ်	ကိုဝိုင်း	မြစ်ဆုံစီမံကိန်းကို ရပ်ဆိုင်းလိုက်သဖြင့် တရုတ်စွမ်းအင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်ပိုရေးရှင်း CPIမှ တရားစွဲလာပါကမြန်မာအစိုးရအနေဖြင့် စီမံကိန်းစာချုပ်ပါ အချက်များကို အများပြည်သူသိအောင် ထုတ်ပြန်ရန် လိုလိမ့်မည်ဟု ...
မြစ်ဆုံဆည်ကိစ္စ ဥပဒေကြောင်းအရ ရင်ဆိုင်ရမည်ဟု တရုတ်ကုမ္ပဏီပြော	အင်္ဂါနေ့၊ အောက်တိုဘာလ ၀၄ ရက် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ၁၉ နာရီ ၄၂ မိနစ်	ကိုဝိုင်း	သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်မှ ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ဆုံဆည် လျှပ်စစ်စီမံကိန်း ရပ်ဆိုင်းလိုက်သည့် အပေါ် ဥပဒေကြောင်းအရ ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရမည်ဟု စီမံကိန်းတွင် အဓိက ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားသည့် တရုတ်စွမ်းအင် ...
ဒေါ်ဘောက်ဂျာ မြစ်ဆုံဆည်ဆောက်သည့် တရုတ်ကုမ္ပဏီကို တရားစွဲမည်ဟုဆို	သောကြာနေ့၊ စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ၁၇ နာရီ ၃၀ မိနစ်	ဖနိဒါ	သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က ဧရာဝတီမြစ်ဆုံရေကာတာ စီမံကိန်းကြီး ရပ်ဆိုင်းထားမည်ဟု ဆိုသော် လည်း တရုတ် စွမ်းအင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရေး ကော်ပိုရေးရှင်း CPI ကို နစ်နာမှု ဆုံးရှုံးမှုများအတွက် တရားစွဲဆိုမည်ဟု အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ ...
မြစ်ဆုံဆည် ရပ်ဆိုင်းထားမှု ကြိုဆို	သောကြာနေ့၊ စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ၁၆ နာရီ ၃၇ မိနစ်	ထွန်းထွန်း	ထိခိုက်မှုများမည်ဟု လူပြောများနေသည့် မြစ်ဆုံဆည်စီမံကိန်းအား ပြည်သူ့ သဘောထား အတိုင်း မိမိအစိုးရ လက်ထက်တွင် ရပ်ဆိုင်ထားမည်ဖြစ်ကြောင်း သမ္မတဦးသိန်းစိန်က သောကြာနေ့တွင် လွှတ်တော်များသို့ ...
မြစ်ဆုံဆည် ရပ်ဆိုင်းသည့် အကြောင်း သမ္မတဦးသိန်းစိန် သဝဏ်လွှာ	သောကြာနေ့၊ စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ၁၆ နာရီ ၁၈ မိနစ်	မဇ္ဈိမသတင်းဌာန	ပြည်ထောင်စု သမ္မတနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး စာအမှတ် ၁၅၁(၂)/၈/၃ဖြင့် လွှတ်တော်သို့ ပေးပို့ခဲ့သည့် (၂၉-၉-၂ဝ၁၁) နေ့စွဲပါ နိုင်ငံတော်သမ္မတ၏ အချက် (၁ဝ) ချက်ပါ သဝဏ်လွှာ အပြည့်အစုံမှာ အောက်ပါအတိုင်း ...
မြစ်ဆုံစီမံကိန်းကို ရပ်နားထားမည်ဟု ဦးသိန်းစိန်ပြောကြား	သောကြာနေ့၊ စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ၁၅ နာရီ ၄၄ မိနစ်	ညီသစ်	အများပြည်သူ၏ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကြောင့် ဧရာဝတီမြစ်ဆုံတွင် တရုတ်နိုင်ငံနှင့် ပူးပေါင်း တည်ဆောက်မည့်မြစ်ဆုံစီမံကိန်းကို သူ၏ အစိုးရလက်ထက်တွင် ရပ်နားထားမည်ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာသမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က ...
မြစ်ဆုံစီမံကိန်း၊ ဒဂုန်တာရာ လေးနက်စွာ ကန့်ကွက်	ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ စက်တင်ဘာလ ၂၈ ရက် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ၁၅ နာရီ ၃၂ မိနစ်	ကိုပေါက်	ဧရာဝတီ မြစ်ဖျားခံရာ အရပ်ရှိ မြစ်ဆုံဆည် စီမံကိန်းအား ‘လေးနက်စွာ ကန့်ကွက်ကြောင်း’ အသက် ၉၄ နှစ် ရှိပြီဖြစ်သည့် စာရေးဆရာကြီး ဒဂုန်တာရာက ငြိမ်းချမ်းရေး ပန်ကြားလွှာ အမှတ် ၃ ကို ထုတ်ပြန် ...
မြစ်ဆုံနှင့် စာပေ အနုပညာရပ်ဝန်း	အင်္ဂါနေ့၊ စက်တင်ဘာလ ၂၇ ရက် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ၂၀ နာရီ ၂၈ မိနစ်	ထွန်းထွန်း	ကျနော်တို့ရမယ့် အကျိုးအမြတ်နဲ့ အကျိုးအမြတ်မျှော်ပြီး လုပ်သမျှ ကာလပတ်လုံး ဘာတခုမှ မကောင်းဘဲဗျာ။ ပေး ရတာနဲ့ ရတာနဲ့ ဘယ်လိုမှ မတန်တဲ့ ...
မြစ်ဆုံဆည်စီမံကိန်း လေ့လာတွေ့ရှိမှုများ ပြည်သူကို ပြောပြလိုတဲ့ ဒေါက်တာထင်လှ	သောကြာနေ့၊ စက်တင်ဘာလ ၂၃ ရက် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ၂၀ နာရီ ၂၉ မိနစ်	ထွန်းထွန်း	မြစ်ဆုံဆည် စီမံကိန်း ကန့်ကွက်မှုများ ဖြစ်ပေါ်နေချိန် ဆည် တည်ဆောက်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ် လာနိုင်သော အကျိုးဆက်များကို လေ့လာခဲ့သော ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲနှင့် သဘာဝ ထိန်းသိမ်းရေးအသင်း ...
« ရှေ့ဆုံးမျက်နှာသို့ ရှေ့တမျက်နှာသို့ 1234နောက်တမျက်နှာသို့ နောက်ဆုံးမျက်နှာသို့ »	စာမျက်နှာ 1 စုစုပေါင်း 4	မေခ - မလိခ မြစ်
We have 52 guests online	www.bysjl.com	© Copyright 1998 - 2012 Mizzima News. All Rights Reserved